Galatifo 3 NA-TWI - Mmara anaa gyidi - Mo Galatifo - Bible Gateway
Galatifo 2Galatifo 4
Galatifo 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Mo Galatifo adwenemharefo! Hena na ɔdan mo adwene saa? Mo ara mo anim na wɔkyerɛkyerɛɛ bɔ a wɔbɔɔ Yesu asɛnnuam no kyerɛɛ mo. 2 Mummua me saa asɛm yi: Moyɛɛ nea Mmara no hwehwɛ sɛ monyɛ ansa na Onyankopɔn Honhom no reba mo so anaasɛ mutiee Asɛmpa no, gye dii ansa? 3 Saa na mo adwene mu yɛ hare? Mode Onyankopɔn Honhom fii ase; afei mopɛ sɛ mode mo ara mo tumi wie? 4 Mo suahu yi nyinaa ho amma mfaso biara? Minnye nni saa. 5 Esiane sɛ moyɛ nea Mmara no hwehwɛ sɛ monyɛ no nti na Onyankopɔn hwiee ne Honhom no guu mo so ma moyɛɛ anwonwade no anaasɛ mutiee Asɛmpa no na mugye dii no nti?